उहाँहरू पार्टीलाई ध्वंस गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली - Nayabulanda.com
उहाँहरू पार्टीलाई ध्वंस गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली
नयाँ बुलन्द ५ बैशाख २०७८, आईतवार ००:०३ 305 पटक हेरिएको
काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि उनको पद जोगिएको हो  ।
कर्णालीमा सांसदहरूले गरेको फ्लोर क्रसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अवस्था किन आयो ?
पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहको निर्देशनअनुसार नै कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएको हो ?
त्यो प्रस्ट देखिन्छ । कसैको आडभरोसाबेगर त्यहाँ यति गम्भीर तहको गल्ती हुन सक्दैन ।
यसले त पार्टी विभाजन नै भयो होइन ?
गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अरू प्रदेशमा यस्तो सम्भावना देखियो नि ?
प्रदेशहरू तरंगित हुन थाले, अब यसको बाछिटा केन्द्र सरकारसम्म पनि आइपुग्छ होला नि ?
जनता समाजवादी पार्टीसँग केन्द्र सरकार जोगाउन भइरहेको वार्ताचाहिँ कुन तहमा पुग्यो ?
हाम्रा कुराकानी सरकारको प्रतिरक्षाका लागि मात्र छैनन् । छलफल गर्दै जाँदा त्यो विषय पनि एउटा एजेन्डा होला । हामी संसद्मा रहेका सबै दलसँग रचनात्मक संवादबाट अघि बढ्न चाहन्छौं ।
केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस हुँदै छ । यता पनि फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था आयो भने के गर्नु हुन्छ ?
पेशागत हकहित, काममा गुणस्तर र राष्ट्रको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी : सन्तोष कटुवाल
सक्षम कांग्रेस बनाउन मेरो उम्मेदवारी : डम्बर खड्का
कोरोना जितेका सञ्जु खनालको अनुभव : मनोवल उच्च बनाए,नियमित पानी तताएर वाफ लिए
झलनाथ र सुवासको विश्वास गरेर भोट दिने इलामेली जनता अहिले पछुताएका छन् : कांग्रेस नेता खड्का
भ्रष्टाचार सहनै नसकेर राजीनामा घोषणा गरें : उपमेयर चौधरी (अन्तर्वार्ता)
न्याय सम्पादन त्यति सहज छैन : संयोजक पराजुली (भिडियो सहित)
सन्दकपुर गाउँपालिकामा विकासको लहर ! कति पूरा भए चुनावी बाचा ? (भिडियो सहित)
युद्धविरामका लागि कोरोनाका चार शर्त !